Bush ayaa waxa uu u qabtay Saddam 48 saacadood gudahood inuu ka baxo Ciraaq,hadii kale dagaal.
Bush oo guriga cad qudbad dagaal ka jeedinaya.
Washington,USA,18 MAR 2003- Saddam Hussein iyo wiilashiisu waxay haystaan 48 saacadood inay iskaga baxaan Ciraaq- hadii kale waa dagaala, sidaas waxaa ku hanjabay madaxweynaha Maraykanka George Bush habeenimadii talaadada saacada GMT markay ahayd 0100.
- Hadii ay sidaa diidaan waxaa bilaabmaya dagaal lagu hoobto oo bilaabmi doona wakhti aan angau dooranayno sidaas waxa yidhi Bush markii uu xalay si toos ah looga daawanayey idaacadaha aduunka isagoo jooga Guriga cad ee Maraykanka looga taliyo.
-Si ayan nafsadoodu khatar u gelin waa in dadka ajnabig ah,xataa weriyayaasha iyo kooxda hubka baadhaysa waa inay sida ugu degdegsiiyaha badan uga soo baxaan Ciraaq,ayuu yidhi Bush isagoo cadho ka muuqato.
Bush oo xanaaq muujinaya,hadana ay ka muuqato sidii nin dagaalamaya ayaa hadalkiisa ku bilaabay hadalo ka hadlaya sida ay Ciraaq u jebisay 12 sano ee ugu danbeeyey qaraaradii faraha badnaa ee ka soo baxay qaramada midoobay,isagoo ka bixinaya Ciraaq iyo Saadaamba sawir naxdin leh,isagoo ku tilmaamay Sadam nimaan nixin.
- Isku daygii la isku dayey in ciraaq hubka looga dhigo si nabad ah in badan baa lagu guul daraystay,ayuu yidhi Bush isagoo hadalkiisa sii wata.
Wararka ay noo soo gudbiyeen kooxaha sirta noo keena ayaa tusaya in aan wax shaki ahi ku jirin in weli Ciraaq haysato,qarinaysona qaar ka mid ah hubka wax gumaada,ayuu yidhi Bush. Wuxuu kaloo Bush sheegay in Ciraaq ay caawiso,waxbarto,oo weliba ay ilaaliso qolyaha ma naxayayaasha ah,ee ay ka midka yihiin al-Qaida. .
- Maraykanku wuxuu xaq u leeyahay inuu is difaaco isagoo isticmaalaya ciidamadiisa xooga badan ayuu ku hanjabay Bush.
Bush wuxuu si toos ah ula hadlayey shacabka reer Ciraaq,wuxuuna u balan qaaday inay weerarka ay soo qaadayaan aan loola jeedin iyaga,balse "raga sida sharci darada ah wadanka ku xukumaya". Wuxuu balan qaaday raashin iyo dawaba,iyo inuu weliba Ciraaq ka dhigi doono marka la qabto wadan horumarsan.
-Ma naxayaashu mar dhow waa tegeyaan. Maalintii xoreyntu waa soo dhowaatay,ayuu yidhi Bush.
Bush waxa uu ku dhiirogeliyey ciidamada Ciraaq iyo shacabkaba in aanay u dagaalamin "Dawlad sii dhimanaysa", iyo in aanay burburin ceelasha shidaalka iyo in aanay isticmaalin hubka wax gumaada. Denbiyada dagaalka qofkii ku kaca waa la ganaaxi doonaa, ayuu ku hanjabey Bush.
Hadalkii uu Bush jeediyey xalay ayaa wuxuu dhirbaaxo kulul ku ahaa Qaramada Midoobay. Wuxuu sheegay in Maraykanku uu jeclaa in uu la shaqeeyo UNta si arinta loogu xaliyo si nabad ah. Maraykanku waxay wax la wadeen UNta shantii bilood ee ugu danbeyeysey,laakiin "qaar ka mid ah golaha amaanka" ayaa waxay si toos u sheegeen inay isticmaali doonaan awoodooda Veto si loo hor istaago isku day kasta oo la isku dayayo in Ciraaq si nabad ah hubka looga dhigo,iyo qaraaradii aan soo jeedinay oo dhan.
- Dawladahaas sidaas samaynaya ayaa waxay qayb ka yihiin khatarta imaan karta,laakiin go,aanka anga noo yaal waxba kama bedeli karaan,ayuu yidhi Bush isagoo duraya wadamada ay ka midka yihiin France,Ruushka iyo Jarmalka oo ah wadamada reer galbedka ee sida ba,an uga soo horjeestay in colaad aduunka lagu abuuro,oo dagaal la iska qaado.
- Qaramada Midoobay waajibkeedii waa ay gudan weydey - markaa anagaa waajibkayagii gudaneyna,ayuu ku hanjabay.
Wuxuu hadalkiisii ku soo gabagebeeyey Bush,hadii Saddam Hussein doorto inuu yeeli waayo sida aan ka rabno inuu yeelo,markaa shacabka Maraykanka waxaan u sheegayaa in aan qaadnay talaabo kasta oo dagaal lagaga bedbaadi.
- Markaa talaabo kasta waa qaadaynaa si aan u guulaysano,ayuu yidhi Bush.
Sidee aduunka looga arkay hadalkii Bush?
Jacques Chirac,Madaxweynaha France .
Paris,France, 18 March 2003 -Madaxa ururka EU-Romano Prodi ayaa waxa uu xaqiijiyey inuu ka xun yahay sida ay dawlada Maraykanku xalka ugu aragto oo keliya in ay Ciraaq u qabato wakhti cayiman oo 48 saacadood ah. Sidoo kale France, China iyo Indonesia ayaa si kulul u canbaareeyey maanta dagaal lagu qaado Ciraaq.
Prodi ayaa waxa uu yidhi maanta,wax fiican laga heli maayo dagaal lagu qaado Ciraaq.
Madaxweynaha France Jacques Chirac ayaa isaguna hoosta xaqiijiyey mar uu ka hadlay hadalkii Bush,in aan aduunyadu taageeri doonin wakhtiga labada maalmood ah ee uu Maraykanku u qabtay Saddam Hussein inuu kaga baxo Ciraaq,hadii uu bixi waayana uu dagaal dhacayo.
Taasi macnaheedu waxay tahay in masuuliyad weyn la iska indha tiray,oo la sika indha tiray sida aduunka oo dhan looga diidan yahay dagaal, ayuu yidhi Chirac hadal uu ka jeediyey xarunta dawlada ee Elys�eplace ee Paris.
Shacabka UK oo taageeraya France,mudaharaadka London.
- France waxay xasuusinaysaa in ay golaha amaanka ee Qaramada Midoobay oo keliya ahi uu xaq u leeyahay in uu go,aamiyo in la isticmaalo xoog,ayuu yidhi Chirac.
Wasiirka arimaha dibada ee Shiinaha Li Zhaoxing,ayaa isaguna isagoo ka hadlaya wakhtiga uu Bush u qabtay Saddam inuu wadanka kaga baxo ayaa waxa uu sheegay in Shiinuhu uu ka soo horjeedo in la isticmaalo xoog.
- Ha la isku dayo in laga hortago dagaal. Anagu qofkii dagaal raba saaxiib lama nihin, ayuu yidhi Li isagoo weriyayaasha la hadlaya.
Indonesia,oo ah wadanka ugu dadka badan wadamada muslimka ah, ayaa si kulul u canbaaraysay maanta sida uu Maraykanku wakhtiga ugu qabanayo Ciraaq,waxayna tageersan yihiin in la sii wado sidii arinta nabad loogu dhamayn lahaa.
- Ma aqbali karno in laga boodo in si diblomaasiyad ah arinta lagu dhameeyo,waxaanuna aragnaa in wakhtigan muhiimka ah loo baahan yahay in diblomaasiyada la sii wado,sidaas waxaa yidhi nin u hadlay wasaarada arimaha dibada oo lagu magacaabo Marty Natalega.
-Laakiin arintu wejiga ay doonto ha yeelato 48 saacadood ee inagu soo aadan,marnaba lagama yaabo in dawlada Indonisia ay taageerto.Dawlada Indonisia uma aragto in wadan keligiis ah oo xubin ka ah Qaramada Midoobay in uu keligiis uu wakhti u cayimo dawlad kale oo iyaduna ka ah xubin Qaramada Midoobay.
Siyaasiyiin reer Indooniisiya ah iyo hogaamiyayaasha diinta ayaa ka digay in ay wadankaas ka dhici doonaan mudaharaadyo iyo iska hor imaad xoog la siticmaalo inuu ka dhaco wadankooda hadii Ciraaq dagaal lagu qaado.